BlackBox: Njikwa ihe egwu maka ESP na-alụ ọgụ Spammers | Martech Zone
BlackBox: Njikwa ihe egwu maka ESP na-alụso ndị Spamm
Sunday, October 19, 2014 Douglas Karr
BlackBox na-akọwa onwe ya dịka nchekwa, agbakwunye na nchekwa data nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ adreesị ozi-e ọ bụla a na-azụ ma na-ere n'ahịa na-emeghe. Ejiri ya naanị site na Ndị Na-enye Ọrụ Email (ESP), iji kpebie ma ọ bụrụ na onye zitere akwụkwọ ozi dabere na ikike, spammy, ma ọ bụ na-egbu egbu kpamkpam.
Ọtụtụ nsogbu ndị na-enye ọrụ email na-abanye bụ ndị spammers na-agba abalị na-azụta nnukwu ndepụta, na-ebubata ya na ikpo okwu ha, wee zigara ya na-amata na ha enweghị ikike. Ha maara na iziga na ndepụta ahụ ga-ewepụta ọtụtụ mkpesa ma nwee ike iwepụ ha na ikpo okwu email - mana ha nọ ebe ahụ iji nweta ozi mbụ ahụ. Spamming a ndepụta abụghị banyere ịmepụta mmekọrịta!
Nsogbu dị na nke a bụ na ndị na-enye ọrụ email nwere aha na ndị na-ahụ maka ịntanetị (ISPs). Ọ bụrụ na ndị ISP hụ nnukwu mkpesa na-abịa site na otu n'ime sava email, ha ga gbochie ozi-e niile na-abịa site na ihe nkesa ahụ! Nke ahụ pụtara na ndị ahịa ọ bụla nwere email na-eziga site na ihe nkesa ahụ metụtara… nwere ike ịbụ gị!
Iji oru dika BlackBox nwee ọgụgụ isi, enwere m obi ike na onye na-ezipụ ozi nwere ike ịkọ ihe egwu dị na onye ahịa ọhụụ na-abata n'ụgbọ mmiri. ESP kwesịrị ịkpachara anya, n'agbanyeghị. M nwere ESP otu oge gwa m ndepụta m agafeela n'ọnụ ụzọ ma aghaghị m iso ha rụrịta ụka. Agbanyeghị na azụtaghị m ndepụta, enwere adreesị ozi-e zuru ezu na ndepụta m dabara na otu n'ime ọdụ data ndị a na-egosi m dịka onye spammer - N'agbanyeghi na m nwere ikike ma na-ezipụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ha mechara chegharịa, ezigara m ndepụta m na ọnụego mkpesa m bụ 0%.
Cheta, nke a abụghị nchekwa data nke adreesị ozi-e anaghị enyefe, ọ bụghịkwa ndepụta nke adreesị email nke na-enweghị ikike. Ọ bụ adreesị email ndị ọtụtụ mgbe zụta ma resị ya site na ọrụ ndepụta email. M kwenyesiri ike na adreesị email m dị na Blackbox… mana m na-edebanye aha na ọtụtụ narị akwụkwọ akụkọ.
Nke a bụ ọrụ bara uru nye ESP ọ bụla nke na-enwe nsogbu na spammers na-ebibi aha ha!
Tags: igbe ojiiblacklistadreesị ozi ịntanetịadreesị ozi-eemail ojiiozi nnapụta emailaha emailemail n'ihe ize ndụ ntulenjikwa ihe egwu emailonye na-enye ọrụ email
Nnukwu Ngwá Ọrụ iji Nchọpụta Koodu Nsuso Google Analytics